Kuleylka Warshadaha Mobilada | Martech Zone
Warshadaha Mobilada Kulaylinta
Sabtida, Juun 11, 2009 Axad, Sebtembar 29, 2013 Douglas Karr
Warshadaha moobiilku runtii way kululaanayaan - suuqgeynta moobiilkuna waa hubaal inay raacayso. Waxaa laga yaabaa in horumarada ugu fiican ay ahaayeen awooda lagu maamulo barnaamijyada xisbiga saddexaad.
Dakhliyada suuq geynta mobilada ayaa lafilayaa inay kudarmaan wax kabadan 24 bilyan oo dollar aduunka oo dhan sanadka 2013, oo ay kuxirantahay qorshooyinka xogta ee sicirka ah iyo raadinta mobilada raadinta, fiidiyowga iyo adeegyada ciyaarta sida ku cad saadaal cusub oo ay soo saartay shirkada ABI Research. Xigasho: Fiilo Wireless ka Baadhitaanka ABI.
Uu hogaaminayo iphone-ka Apple ee leh ka badan 1 bilyan oo barnaamij oo laga soo dejiyo 9 bilood gudahood, Blackberry, Verizon, Microsoft iyo Android waa hubaal inay raacayaan. Go'aannada sare, adeegsiga weyn iyo kontaroolada kumbuyuutarka ee buuxa ee taleefannada cusub ayaa furaya warshadaha, oo ay weheliyaan xawaaraha waxqabadka iyo xusuusta. Xitaa ciyaartoydii hore ee suuqa ku jiray ayaa dib loo dhashaa… hubi Nokia N97. (Jeclow xayeysiiska fayraska leh LL Cool J, sidoo kale)
Haddii aadan fiidiyowga arkin, dhagsii boostada, Warshadaha Mobilada Kulaylinta. Anigu kuma hayo Mobile-ka iyo sidoo kale sida ay tahay… macno ahaan kaliya qalin jebinta Blackberry. Saaxiib iyo Suuq-mobile guru, Adam Small, ayaa qori doona qoraallo dhawaan Martech Zone waana sugayaa!
Tags: warshadaha mobiladamarketing mobile
Jul 14, 2009 markay ahayd 2:43 AM
Qoraal weyn oo ku saabsan Warshadaha Mobilada! Waxaan rajeynayaa inaan wax ku darsado.